Uthando Lwensindiso KaNkulunkulu Ngesintu | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Uthando Lwensindiso KaNkulunkulu Ngesintu
2018-03-08 12:13:59 0
UDanyi Esifundazweni SaseSichuan
Kunomuzwa wokuba necala ogcwala enhliziyweni yami ngaso sonke isikhathi uma ngibona lawa mazwi kaNkulunkulu: “Inkinga enkulu ngomuntu ukuthi akukho okunye akucabangayo ngaphandle komphumela sakhe namathemba akhe, nokuthi ayizithixo kuye. Umuntu uphokophelela uNkulunkulu ngenxa yomphumela namathemba akhe; akadumisi uNkulunkulu ngenxa yothando lwakhe Ngaye. Ngakho, ekunqotshweni komuntu, ukugombela kwesakhe, ukuhala kanye nezinto ezivimbela kakhulu ukukhonza kwakhe uNkulunkulu kufanele ziqedwe nya. Ngokwenze njalo, imiphumela yokunqotshwa komuntu izofezeka. Ngenxa yalokho, ekuqaleni kokunqotshwa komuntu kunesidingo sokukhipha izifiso zakhe ezidlondlobele, kanye nobuthakathaka bomuntu obudala usizi olukhulu, futhi, ngokwenze njalo ukuveza uthando lomuntu ngoNkulunkulu, nokushintsha ulwazi lwakhe ngempilo yomuntu, ukubuka kwakhe uNkulunkulu, kanye nencazelo mayelana nesizathu sokuba khona kwakhe. Ngale ndlela uthando lomuntu ngoNkulunkulu luyahlanzwa, okusho ukuthi, inhliziyo yomuntu iyanqotshwa” (“Ukubuyisela Impilo Ejwayelekile Yomuntu Nokumhambisa Endaweni Emangalisayo Okuphokophelwe Kuyo” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Kube kuphela ngokwahlulelwa nokusolwa kaningi uNkulunkulu ukuthi ekugcineni ngisangulukile futhi ngabona ukuthi lokho uNkulunkulu akudingayo uthando lwesintu oluhlanzekile, olusemgomweni owodwa, nokuthi kulungile futhi kuzifanele zonke izidalwa ukuba zifune ukuthanda uNkulunkulu nokuba zenze umsebenzi wazo. Ngaphinde ngabona ukuthi lapho abantu bengasacindezelwa yisimiselo sekusasa labo futhi sebekwazi ukuphilela uNkulunkulu, umsebenzi wokunqoba kubo uzothela izithelo. Nokho, lapho ngisasebenza njengomholi, ngangingenzi mzamo wokufuna iqiniso; njalo ngangibuswa imicabango yisimiselo sekusasa lami. Ngenxa yalokhu, ngangibhekana njalo nokucwengwa kwaze kwaba seqophelweni lokuthi ngibe nombono ophambene, futhi lokhu akubanga nokulahlekelwa empilweni yami nje kuphela, kodwa kwaphinde kwalimaza nomsebenzi wami endlini kaNkulunkulu. Nokho, uNkulunkulu akazange abhekane nami ngokusekelwe eziphambekweni zami. Wanginika amathuba amaningi okuphenduka. Kwaba nokwahlulelwa nokusolwa kanye nokucwengwa okunzima okuvela emazwini kaNkulunkulu, ukondliwa, ukududuzwa, ukusekelwa, kanye nokweluswa okuvela emazwini Akhe, uMoya oNgcwele ungihola, ungikhanyisela, futhi ungikhanyisela indlela kaningi—kwaba kuphela ngalezi zinto lapho ngakwazi isinyathelo ngesinyathelo ukukhululeka ogibeni lukaSathane, ngingalahlekelwa yindlela yami, futhi ngihambe endleleni efanele ekuphileni. Lapho ngizindla ngensindiso kaNkulunkulu kimi, isikhathi esedlule sicace kakhulu.
Ngazalelwa emaphandleni. Nganginodadewethu abathathu, futhi ngenxa yokuthi ubaba wayelandela emqondweni ovamile wokuqhubela phambili uhlu lozalo, wakhetha ukuhlawuliswa ngokuba nabantwana abangaphezu kwabavunyelwe umthetho kunokuba angabi nendodana. Ngenxa yokuthi udaba lokuthanda abafana lunamantombazana lunamandla kakhulu emaphandleni, noma yiliphi ikhaya elingenayo indodana libhekwa njengelinohlu lozalo olunqamukile. Lena yinto eyayimlethela usizi kakhulu ubaba, futhi abazali bami babexabana njalo ngenxa yayo. Kaningana kwakuba nezinsongo zokuhlukanisa futhi ubaba wami wayevame njalo ukwephula izinto. Njalo ngangifisa usuku lapho abazali bami bengeke besalwa khona. Ngikhumbula ngesinye isikhathi lapho umzala wami engikhakhabisa ngenxa yento encane “Uhlu lozalo lomndeni wakini lunqamukile!’’ Angizange ngisho lutho lapho ngizwa lawo mazwi abuhlungu. Kusukela ngaleso sikhathi, ubuthi bukaSathane bokuthi “Ngubani othi amantombazana awamahle njengabafana,’’ “isithunzi somndeni,’’ kanye nathi “ukuya phambili’’ athola ukujula emphefumulweni wami. Ngaba nesifiso: Ngiyindodakazi endala emndenini, futhi ngizolwela ukuthola ukuqashelwa kwabazali bami. Ngolunye usuku ngizokhombisa ukuthi ngisho noma abazali bami bengenayo indodana, ukuba nendodakazi kungcono nakakhulu.
Esikoleni samabanga aphansi ngangiwumfundi okhuthele futhi ngihlanganyela ngomdlandla kuzo zonke izinhlobo zemisebenzi yesikole. Ngangivame ukunconywa njalo ngothisha bami futhi ngaphinde ngathola nemiklomelo. Ekilasini lami ngangiyilunga lekomiti lobuciko, ilunga lekomiti lokucwaninga, ukaputeni weqembu, kanye nelunga leNhlangano Yentsha Yamakhomanisi. Lapho ngifika esikoleni samabanga aphakathi ngaba ummeli wekilasi olimini lwesiShayina futhi minyaka yonke ngangithola imiklomelo kuyo yonke imihlangano yezemidlalo. Ezweni lakithi, babenza ividiyo njalo ngoSuku Lothisha futhi isikole sasiba nohlelo lwezemidlalo. Uthisha wami wayengicela ngokukhethekile ukuba ngihlanganyele endimeni yokuhola. Ngaleso sikhathi uthisha wami wayengihlonipha, kanti engangifunda nabo babenomona. Lapho ubaba ebona ukuthi ngangivele kuthelevishini wamamatheka kwaqhilika izihlathi futhi waziqhenya kakhulu ngami. Lapho ngibona ukumamatheka ngokujabula kwakhe, ngahlabeka umxhwele ngokuthi ngangithole lokhu kuqashelwa nguye.
Ekupheleni kuka-1999, umndeni wethu wonke wamukela umsebenzi omusha kaNkulunkulu, futhi ngenxa yokuthi ngangibuswa imicabango yokubusiswa, ngaqala impilo yokushiya ikhaya ukuze ngenze umsebenzi wami. Ukuze ngithole ukugunyazwa umholi kanye nokusekelwa abafowethu nodadewethu, ngenza konke okusemandleni ami ukubekezelela ubunzima ekufezeni umsebenzi wami, futhi ngangenza konke engingakwenza ukuze ngenze noma yimuphi umsebenzi owawudingwa yindlu kaNkulunkulu noma owawuhlelwe umholi. Ngaleso sikhathi, ngangingomunye wabantu abaphezulu ezisebenzini engangikanye nazo emsebenzini wevangeli, futhi wonke umsebenzi wami wawuba nezithelo. Noma ukuqonda kwami iqiniso kwakukha phezulu, lapho abafowethu nabodadewethu benezinkinga ekhaya, izinkinga emsebenzini wabo, noma ubunzima ekungeneni kwabo ekuphileni, njalo ngangibheka amazwi kaNkulunkulu bese ngihlanganyela kanye nabo. Abafowethu nabodadewethu babezwana nani futhi umholi wayengihlonipha. Ngaqala kancane kancane ukuzwa ukuthi nganginesiphiwo esiyivelakancane endlini kaNkulunkulu.
Ngasekuqaleni kuka-2006, ngakhushulelwa esikhundleni sokuba umholi wesifunda, futhi ngesikhathi ngibona ukuthi izithelo endaweni enganginomthwalo wayo zazingcono kunezinye izifunda, ngacabanga: Ngisho nakuba bengingakaze ngenze lolu hlobo lomsebenzi, ngenza wonke umsebenzi ngokushesha kunabanye kanti nemiphumela yomsebenzi wami nayo ingcono. Umholi ufuna futhi ukungiqeqesha; ukube abazali bami bebazi ukuthi ngingenza lo msebenzi angazi ukuthi bebeyojabula kangakanani. Ikakhulu lapho ngiya ukuyosebenza edolobheni engazalelwa kulo, njalo kwakuhlala kunomuzwa wokubuyela ekhaya ngenkazimulo, futhi ngangethemba ukuthi ngizobona abafowethu nodadewethu abaningi abangaziyo ukuze bazi ukuthi imisebenzi engangiyenza yayikulelo zinga. Ngangiphila esimweni sokuzihalalisela, futhi ngisho nendlela yami yokukhuluma yase iguqukile. Ngase ngiqale ukugxila esithunzini sami emehlweni abanye abantu. Ngaleso sikhathi, ngangingasagxilile ekwenzeni izwi likaNkulunkulu futhi ngingasafuni ukungena ekuphileni. Kunalokho, ngagxila embonweni nasekuhlolweni kwami umholi, kanye nasekutheni abantu engangibasebenzela bayangisekela yini. Ngokuhamba kwesikhathi, ngase ngingasakwazi ebandleni ukuxazulula izinkinga noma ukuphambuka noma ukusilela emsebenzini walabo engangibasebenzela. Lapho ngihlangana nezisebenzi engikanye nazo ngangingasabelani noma nakuphi ukuhlanganyela nabo. Lokhu kwakubuhlungu kakhulu kimi, futhi ngazizwa nginjengofe ehamba, ophila ebumnyameni. Ekugcineni, angizange nje kuphela ngingakhushulelwa esikhumdleni, kodwa ngehliswa esikhundleni. Ngaleso sikhathi ngezwa ubuhlungu kakhulu, ngase ngicabanga: Uma abazali bami kanye nabafowethu nodadewethu abangaziyo bebangazi ukuthi ngigudluziwe emsebenzini, yini abebazoyicabanga ngami? Ngeke ngikwazi ukuthola ukuhlonishwa umndeni noma ukuvelela. Kubonakala sengathi kuphelile ngami, futhi anginalo ikusasa engizokhuluma ngalo. Ngaba nokuphelelwa yithemba okukhulu futhi ngingasafuni ukufunda izwi likaNkulunkulu, ukuthandaza, futhi ngangingasafuni ngisho nokubona noma ukuthintana nabafowethu nodadewethu. Ubuthakathaka nokuba nombono ophambene enhliziyweni yami kwase kufike eqophelweni elithile. Kamuva, ngabona lawa mazwi avela kuNkulunkulu: “Ekufuneni kwakho, unokucabanga okuningi kakhulu komuntu ngayedwana, amathemba, kanye nekusasa. Umsebenzi wamanje uqondene nokubhekana nokulangazelela kwakho isikhundla kanye nalokho okukhulu okulangazelelayo. Amathemba, ukulangazelela[j] isimo, kanye nokucabanga konke kumele isimo sakudala sobusathane. Isizathu sokuthi kube khona zonke lezi zinto ezikhona ezinhliziyweni zabantu zibangelwa ukuthi ushevu kasathane uhlala udlavuza imicabango yabantu, futhi abantu abakwazi ukuchiliza lezi zilingo ezivela kuSathane. Baphila phakathi kwezono kepha basakholwa ukuthi yisono, futhi basakholwa: ‘Sikholwa kuNkulunkulu, ngakho kumele ehlise izibusiso phezu kwethu futhi asihlelele yonke into ngokufanele. Sikholelwa kuNkulunkulu, ngakho kufanele siphakeme kunabanye, futhi kumele sibe nesikhundla esingcono kanye nekusasa elingcono kunabanye abantu. Njengoba sikholwa kuNkulunkulu, kumele asinike izibusiso ezingenamkhawulo. Kungenjalo, bekungeke kubizwe ngokuthi ukukholwa kuNkulunkulu’” (“Kungani Ungazimisele ukuba Isiqhathaniso?” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Yonke imisho yalawa mazwi esambulo sikaNkulunkulu yahlaba inhliziyo yami. Ukuthi ngagudluzwa esikhundleni kwakuyisimo sokulunga sikaNkulunkulu esangehlela, futhi sasizobhekana nokukhathalela isikhundla enhliziyweni yami. Kusukela ngiseyintombazane encane, ubuthi bukaSathane bokuthi “Ngubani othi amantombazana awamahle njengabafana,’’ “isithunzi somndeni,’’ kanye nathi “ukuya phambili’’ babuqhubeka bonakalisa imicabango yami kwaze kwaba seqophelweni lokuthi imibono yami ekukholweni kuNkulunkulu yaba mibi ngokungabekezeleleki. Ngenxa yokubuswa yile micabango, ngasebenza kanzima ekwenzeni umsebenzi wami, ngimatasa iminyaka eminingi ngehla ngenyuka, kodwa eqinisweni ngangifuna ukusebenzisa uNkulunkulu ukuze ngifeze imigomo yami yokuvelela nokuthola ukuhlonishwa umndeni. Ngangenyanyeka kakhulu! Ngimubi ngempela! Ngamaqiniso nangokwahlulelwa ngamazwi Akhe, uNkulunkulu wadalula ukuthi imibono yami yangaphakathi yalokho engangikufuna yayifana ncamashi nekaSathane. Ngangisendleleni yokwehluleka, futhi ngaphandle kokwehlulelwa nokusolwa okwafika ngesikhathi kukaNkulunkulu, ngabe ngaqhubeka ngibambelela kulolu hlobo lokufuna izinto futhi ekugcineni, ngabe ngawela kuphela ekuchithakaleni kwami futhi ngaba nesiphetho esifanayo nesikaPawulu.
Ngacabanga ukuthi kufanele kube khona uguquko oluthile ngemva kokuthola lokhu kuqonda, kodwa kwaba nesinye isambulo ngo-2008 esangiphoqelela ukuba ngibone lolo guquko lwesimo lungeyona into elula njengokuba ngangicabanga. Angikwazanga ukuguquka ngokuba nje nokuqonda okuncane ngemibono yokufuna ngemva kokubhekana nokucwengwa okuthile. Ukuguquka kwenzeka kuphela ngokwahlulelwa nangokusolwa isikhathi eside. Ngaleso sikhathi ngangabelwe ukuba ngiyokwenza umsebenzi wokuniselela uNkulunkulu kwenye indawo. Lapho umhlangano nodade owayengamele umsebenzi usuphelile, ngaqala ukulinganisa enhliziyweni yami ukuthi ubani phakathi kwethu owayekahle ekuhlanganyeleni, nokuthi sasiyini isigaba sami. Ngagxilisa ukunaka kwami okukhulu imibonweni nesesimweni sengqondo sikadade owengamele umsebenzi ngami. Lapho ngibona ukuthi wayenaka omunye udade, ngazizwa ngikhubekile. Lapho ethi kimi angihambe ngiyonisela abaholi namadiyakoni ebandla, ngacabanga ukuthi kwakumane kuwukudlala ngamakhono ami futhi ngaba nomuzwa wokuthi akakwazi ukuphatha abantu. Okungenani nganginganisela abaholi nezisebenzi zesifunda. Ngenxa yalesi sizathu ngaba nombono ofiphele ngase ngidumazeka futhi ngalahlekelwa ukuzimisela kwami okufuna. Ngangiphila esimweni sokuba nombono ophambene. Ngisho noma ngangishayise izikhathi ezimbalwa, angizange ngicabange lutho ngalokho. Kamuva isimo sokulunga sikaNkulunkulu sangifikela futhi ngaphinde ngaba nesifo se-appendicitis, kodwa ngangilokhu ngingayiguquli inhliziyo yami elukhuni. Kwaze kwaba, ngesinye isikhathi lapho ngifaka ibhodlela lomuthi wokwelapha ukoma konyawo kanye nokuklayeka ngemva kwetafula lasebusuku ekhaya lomndeni owawungamukele. Intombazane eneminyaka eyisikhombisa ubudala yalapho yacabanga ukuthi kwakuyinto enhle futhi yawuphuza ngasese, futhi ngemva kwalokho yase iphansi, ibambe isisu sayo esibuhlungu futhi ikhala. Ngaleso sikhathi ngesaba kakhulu ngingazi ukuthi kufanele ngenze njani. Udadewethu wasekhaya elalingamukele wathatha ingane ngokushesha wayiyisa emtholampilo womphakathi ukuze ayisindise, futhi udokotela wathi: “Isisu sengane sincane kakhulu, kodwa awuzange uyithathe uyiyise Esibhedlela Sabantwana. Ingabe ufuna ukumane uyilinde ukuba ife?” Imilenze yami kwaba sengathi ifile, futhi lapho ngicabanga ngalokho udokotela akusho, ngakhathazeka ngokujulile. Angazanga ngisho nokuthi ngahamba kanjani ukubuyela emuva ekhaya elalingamukele ngisuka emtholampilo. Ngacabanga: Uma ngempela ingane ifa, abazali bayo nakanjani bazobheka lokho okwenzekile…. Lapho ngicabanga ngakho ngokwengeziwe ngesaba ngokwengeziwe. Ngangifuna ukukhala kodwa izinyembezi zingaphumi. Isikhathi sasihamba ngomzuzwana owodwa nangomzuzu owodwa ngesikhathi. Ngangingakwazi ukuziduduza—ngangizwa ubuhlungu ngempela. Ngaphenya amazwi kaNkulunkulu futhi ngabona okulandelayo: “Ngikholwa ukuthi kuzosisiza kakhulu ukuthola indlela elula kakhulu yokwanelisa Yena, okuwukuthi, bahlonipha zonke izinhlelo zaKhe, futhi uma ungakwazi ukufeza lokhu ngokweqiniso uzokwazi ukulungisiswa. Akusiyo yini into elula nejabulisayo le? … Emsebenzini kaNkulunkulu wanamuhla, Akacasuki kalula, kodwa uma abantu befuna ukuphazamisa uhlelo lwaKhe Angashintsha ubuso bakhe ngokuphazima kweso obebubuhle bube bubi. Ngakho, Ngineluleka ukuthi nibeke amaphaphu phansi, nihloniphe izinhlelo zikaNkulunkulu, nivumele Yena ukuthi aniphelelise. Le yiyona kuphela indlela yokuba ngumuntu ohlakaniphile” (“Indlela… (7)” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Emazwini kaNkulunkulu ngabona ukuthi isimo sikaNkulunkulu asikubekezeleli ukona kwabantu; ngabona ukuthi izenzo zami zenyanyise uNkulunkulu futhi zavusa ulaka Lwakhe. Ukuze angikhombise indlela, ungenze ukuba ngazi indlela okufanele ngenze ngayo ekufuneni. Ngesikhathi ngigula futhi ngisebuhlungwini, angizange ngizihlole. UNkulunkulu waphinde futhi wasebenzisa ingozi yentombazane encane eyaphuza umuthi ukuze angisole, angenze ngihlupheke, angenze ngikwazi ukubeka lezi zinto eceleni, ngifune iqiniso, futhi ngilalele amalungiselelo kaNkulunkulu. UNkulunkulu ngeke akubekezelele ukungibona ngiqhubeka ngidukiswa uSathane, ngizabalaza kanzima futhi ngehla ngenyuka ngifuna idumela nesikhundla. Lolu hlobo lokwahlulela, ukusola, nokuhlanjululwa kwaba ngumzamo Wakhe wokugcina, wokungenza ngibone umgodi ojulile wesikhundla engangivaleleke kuwo. Ukuhlangabezana nokusolwa okumbalwa akuzange kuyiphaphamise inhliziyo yami; ngangilokhu ngingakwazi ukuzikhulula ekulawulweni nasekuhlushweni yimvelo yobusathane ekimi. Uma ngibheka emuva, lapho ngiqala ukwenza umsebenzi, ngangiqhosha ngokuba ovelele, futhi ekuqaleni ngangikholwa ukuthi ngizokhushulelwa esikhundleni senjongo ebalulekile; angizange ngicabange ukuthi ngizokwehliswa esikhundleni ukuze ngeze umsebenzi osezingeni eliphansi. Abantu engangicabanga ukuthi abekho ezingeni lami babenisela abafowethu nodadewethu emazingeni obuholi bezifunda, futhi abanye babo baze bakhushulelwa ngisho ezikhundleni ngesikhathi amathemba ami ebonakala efiphala. Ngacabanga: Ukubuyela ekhaya kungaba ngcono kunokuba ngenze umsebenzi wami lapha. Ngakho, lapho ngihlangana nabaholi bebandla, ngaqala ukumane ngenze ngendlela yokugcina icala. Angizange ngithathe noma yiziphi izibopho ngokuphila kwabo, futhi angizange ngithwale umthwalo wangempela ngezinkinga ezahlukene ezazisebandleni, ingasaphathwa eyokucabangela intando kaNkulunkulu. Ngaleso sikhathi, lapho ngibhekene namazwi kaNkulunkulu ayegcwele isihe nothando, ngazizwa ngimkweleta kakhulu. Imicabango kaNkulunkulu ngeyezimpilo zesintu, futhi unikeza isintu yonke into; lokhu ukuhlenga isintu ngokuphelele ekubusweni uSathane. Kodwa ngangingafuni ukunikela noma yini emsebenzini wami kuNkulunkulu. Umsuka wenkinga ukuthi njalo ngangiboshwe futhi ngibuswa ubuthi bukaSathane. Ngangifana nengane engahlakaniphile engenakho ukuqonda izinhloso ezinhle zabazali bayo; ngalahlekelwa amathuba amaningi kakhulu okupheleliswa uNkulunkulu. Ngokuphaphanyiswa kuphela ukuthi izinto zase zifinyelela kulelo qophelo—ingabe kwakungephuzile kakhulu? Ngawela phansi, ngigcwele ukuphenduka nokuzisola: “O Nkulunkulu, ukwahlulelwa nokusolwa okungifikele namuhla konke kungukulunga Kwakho. Ngizimisele ukulalela. Uma kusekhona ithuba, ngizimisele ukuguquka, ukuba ngingehli ngenyuka ngenxa yesimiso sekusasa lami. Ngizimisele ukumane ngibe yisidalwa esincane esandleni Sakho, ukuba ngenze umsebenzi wami wokunisela kahle ngangokunokwenzeka, futhi ngiduduze inhliziyo Yakho.” Ngemva kokuba ngithandazile, inhliziyo yami yaba nokuzotha. Ngazimisela ukuzinikela ngokuphelele kuNkulunkulu, futhi ngazimisela ngokwengeziwe ukubeka leyo ntombazane encane ngokuphelele kuNkulunkulu. Kungakabiphi, ngezwa umsindo walowo dade womndeni owawungamukele evula umnyango, futhi intombazane encane yamemeza: “Babekazi, ingabe uzongibamba?” Khona-ke ngokuthula yathi kimi: “Babekazi, kufanele ukugcine lokhu kuyimfihlo ngokuphelele; akufanele utshele ugogo wami ukuthi ngiphuze amanzi akho!” Ngaleso sikhathi inhliziyo yami ekugcineni yakhululeka, ngokubona ukuthi uNkulunkulu owazi ukuthi bangaki abantu, izehlakalo, kanye nezinto uqondise izinto ngokuhlakanipha ukuze asindise mina, leli “litshe.” Ngezwa ukuthi ngangingafanele ngokuphelele. Kusukela lapho, izinhloso zami azibange zisaba ezesimiselo sekusasa lami. Ngazimisela futhi ngenza konke okusemandleni ami ekwenzeni umsebenzi wami wokunisela ukuze ngiduduze inhliziyo kaNkulunkulu. Kwase kungesikhona ukumane ngenze ngendlela yokugcina icala, futhi lapho ngithola ukuthi kube khona ukuphambuka noma ukusilela emisebenzini yabafowethu nodadewethu, ngangimane ngikhulume nabo ngesineke, ngibasize, futhi ngibasekele. Ngokuhlanganyela kwami nabafowethu nodadewethu ngathola iqiniso elithile, futhi ngaleso sikhathi ngafunda izifundo ezithile kubo. Ngaleso sikhathi angibange ngisakholelwa ekutheni amakhono ami kwakudlalwa ngawo. Ngaqonda izinhloso ezinhle zikaNkulunkulu, nokuthi ukwenza lo msebenzi yilokho okudingekayo ekuphileni kwami. Kwaba uNkulunkulu owahlela isimo ngokuvumelana nobuthakathaka bami. Ngiyambonga uNkulunkulu! Kusukela lapho, ngakwazi ukwenza umsebenzi wami ngokukhululeka. Ngangingazange ngicabange ukuthi kungakabiphi, umholi uzokhuluma nami bese engicela ukuba ngiyonisela abaholi nezisebenzi zesifunda ezigodini ezimbili. Khona-ke ngabona isimo sokulunga sikaNkulunkulu, ukuthi uhlola ukujula kwenhliziyo yomuntu futhi uphethe yonke into. Lokho uNkulunkulu akuthandayo ngumuntu othobekile owenza umsebenzi wakhe. Ngibonga uNkulunkulu ngokunginika ithuba lokwenza umsebenzi wami. Lapho ngihlangana nabaholi besifunda ngathola izinkinga ezithile futhi ngazisingatha ngokucophelela. Futhi ngabhala phansi izinkinga engangizitholile emhlanganweni ngamunye, ukuthi yiziphi izinkinga ezandile ezazikhona, indlela engangizixazulule ngayo, kanye nokuthi yiziphi izinkinga engangingakazixazululi. Ngemva kwesikhathi esithile ngezwa ukuthi ukwenza umsebenzi wami ngale ndlela kwakungokoqobo ngempela. Inhliziyo yami yaba nokukhululeka nokuthula futhi ngangingasekho ngaphansi kokubuswa ubuthi “bokuba phambili.” Ngezwa sengathi ngangihlome ngokuba nokuqonda iqiniso elithile eliphelele ezingxenyeni ezahlukahlukene, engangingangena kulo nabafowethu nodadewethu, ukuthi ngangiwumuntu ophansi. Ngaqonda ukuthi ukwenza umsebenzi wami njengesidalwa yisimiso esingenakuguquka, nokuthi kufanele ngibe njengesotsha, ngilalele imithetho njengomsebenzi wami ongcwele, ngingazicabangeli noma ngizihlelele mina, kodwa kuzo zonke izinto ngenze okuthandwa yindlu kaNkulunkulu kube okubalulekile. Yilokhu okufanele kwenziwe yisidalwa.
Ekupheleni kukaFebhruwari 2012, ngayiswa kwesinye isifundazwe ukuyokwenza umsebenzi wami. Ngaleso sikhathi inhliziyo yami yase izothe kakhulu, futhi ngangingasenakho ukujabula lapho omunye ehlelwa yingozi njengoba nganginjalo ngaphambili. Lapho ngisanda kuhamba ngiyoqala isikhundla kwenzeka ukuthi kube ngesikhathi indlu kaNkulunkulu yenza ukukhuculula ibandla. UMfowethu wathi elungiselelweni lomsebenzi: “Umsebenzi wokukhuculula izinhlobo ezinhlanu zabantu ebandleni kufanele uqedwe ngaphambi kuka-2012 weholide Losuku Lwezisebenzi. Ngenxa yokuthi umsebenzi wokuhlanza uvula indlela yokwandisa umsebenzi wevangeli lombuso, akufanele ngempela ube nomthelela emsebenzini wevangeli” (“UNkulunkulu Ukhazinyuliswa Ngokuphelele Kuphela Ngokukhucululwa Kwebandla Nangokuqinisekisa Ukwandiswa Okushelelayo Kwevangeli Lombuso” kwethi Imiqulu Yokuhlanganyela Namalungiselelo Omsebenzi Webandla II). Abanye abaholi nezisebenzi badinga ngokushesha ukususwa ezikhundleni; ingxenye ngayinye yomsebenzi yacishe yama. Ngenxa yesivikelo sikaNkulunkulu, angizange nginqotshwe ubunzima bangaleso sikhathi. Ngesikhathi ngilungisa abaholi nezisebenzi, ngangihlela abantu abafanele bokuqoqa izinto zalabo abazokhishwa futhi baxoshwe. Nokho, kwathi kufika ekupheleni kukaMashi, ngabona ukuthi kwakulokhu kungekho nesisodwa isaziso sokukhuculula umuntu esikhishiwe. Ngabhekana ngempela nokucwengwa enhliziyweni yami. Nganginezizathu kanye nezaba eziningi; ngacabanga ukuthi ngangisazilolongela ukwenza lo msebenzi, ukuthi ngangingacacelwa kahle yiqiniso, nokuthi ngangingeke ngikwazi ukuqhubeka nomsebenzi wokwengamela lo msebenzi. Lapho nje ngisathola ukucwengwa, udade owayengamele umsebenzi wangibiza ezobhekana nami. Ngathukuthela kakhulu ngaleso sikhathi futhi ngangingazimisele ukukwamukela. Ngazizwa ngoniwe enhliziyweni yami. Ngacabanga: Ngisanda kufika lapha, wazi kahle ukuthi umsebenzi wami unjani. Kade ngenza konke okusemandleni ami ukuze ngibambisane, futhi awungiduduzi, kodwa kunalokho ubhekana nami. Kanjalo nje, ngangiphila phakathi kokucwengwa kanti izwi elithi “susa esikhundleni” lalingihlupha. Nakuba ngangenza umsebenzi, ngase ngilahlekelwe ukuzethemba, futhi ngangicabanga njalo: Kulokhu nakanjani ngizosuswa esikhundleni ngenxa yokuthi kuthiwa elungiselelweni lomsebenzi abaholi abangeke benze umsebenzi wokukhipha nokuxosha izinhlobo ezinhlanu zabantu kufanele basuswe esikhundleni. Kamuva, ngacabanga ngeculo lezwi likaNkulukulu engangivame ukulicula njalo: “Lapho ukucwenga kukaNkulunkulu kuba kukhulu ngokwengeziwe, izinhliziyo zabantu zikwazi ukuthanda uNkulunkulu ngokwengeziwe. Ukuhlukumezeka okusezinhliziyweni zabo kuwumhlomulo ezimpilweni zabo, bakwazi ngokwengeziwe ukuba nokuthula phambi kukaNkulunkulu, ubudlelwane babo noNkulunkulu busondelana ngokwengeziwe, futhi bakwazi kangcono ukubona uthando olukhulu lukaNkulunkulu nensindiso Yakhe enkulu. UPetru wezwa ukucwengwa izikhathi ezingamakhulu, futhi uJobe wehlelwa ukulingwa okuningi. Uma ufisa ukupheleliswa nguNkulunkulu, nawe futhi kufanele ucwengwe izikhathi ezingamakhulu; kulapho kufanele wedlule kule nqubo kuphela, futhi kufanele wethembele kulesi sinyathelo, lapho ukwazi khona ukwanelisa intando kaNkulunkulu, futhi upheleliswe nguNkulunkulu. Ukucwenga kuyindlela enhle kakhulu uNkulunkulu enza ngayo abantu baphelele; ukucwengwa nezilingo ezinzima kuphela ezingakhipha uthando lwangempela lukaNkulunkulu ezinhliziyweni zabantu. Ngaphandle kobunzima, abantu bantula uthando lwangempela lukaNkulunkulu; uma bengavivinywa ngaphakathi, futhi bengacwengwa ngempela, izinhliziyo zabo ziyohlala zintantela kwezinye izindawo. Lapho nicwengwe kwafika eqophelweni elithile, niyobona ubuthakathaka nobunzima benu, niyobona ukuthi nintula kangakanani nokuthi anikwazi ukunqoba izinkinga eziningi enihlangana nazo, niyobona ukuthi ukungalaleli kwenu kukhulu kangakanani, futhi niyokwazi ukuzazi ngempela. Uma kuphela kufanele nedlule kule nqubo, futhi kufanele nethembele kulesi sinyathelo, niyakwazi ukwanelisa intando kaNkulunkulu, nokupheleliswa nguNkulunkulu” (“Ukucwenga Yindlela Enhle Kakhulu UNkulunkulu Aphelelisa Ngayo Abantu” kwethi Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha). Ngokuqondiswa amazwi kaNkulunkulu, ngabona ukuthi ukucwengwa kuyindlela engcono kakhulu kaNkulunkulu yokuphelelisa abantu, nokuthi ukube udadewethu akazange abhekane nami, inhliziyo yami yayizobe ilokhu intanta. Ngenxa yokuthi ubuvila bami kanye nokukhonza ngenjongo yokuzuza okuthile kwakunamandla kakhulu, kungalolu hlobo kuphela lwesimo okwakudingeka ukuba ngikhuthale futhi ngiyeke ukuba nezizathu kanye nezaba. Kwaba kuphela ngalolu hlobo lokucwengwa lapho ngakwazi khona ukubona ngokucacile ukuthi ngangingelutho nokuthi nganginamaphutha amaningi kakhulu, kodwa futhi kwadalula ukuthi ngangilokhu ngingaphansi kokubuswa imicabango yesimiselo sekusasa Lami. Nakuba ngaba nokuhlangenwe nakho okuningana kokusolwa kule minyaka embalwa, ngangingasazimisele ukufuna noma yiluphi uhlobo lwedumela noma isikhundla oluyize, futhi ngangibe othembeke kakhulu ngaphandle, ekujuleni komphefumulo wami ubuthi bukaSathane babulokhu bukhona. Ngacabanga ngezimo ezazikhona ngaphambi kokuba ngifike lapha: Zangibomisa ukuthi umholi ongaphambili akazange enze umsebenzi ongokoqobo, kodwa wayemane akhulume imfundiso, engawenzi umsebenzi wokukhuculula ibandla. Ngacabanga: Ngeke ngibe umuntu omane akhulume imfundiso kodwa angenzi umsebenzi ongokoqobo. Kufanele ngeze kahle umsebenzi wami, futhi ngikhuculule ngokuphelele lezi zinhlobo ezinhlanu zabantu ngaphambi Kosuku Lwezisebenzi ukuze labo engibasebenzelayo bezobona ukuthi ngingcono kunomholi wangaphambili, ukuze umuntu owengamele ezongiqaphela. Kwahlaluka ukuthi ngangehla ngenyuka futhi ngisebenza kanzima ukuze ngifeze leso sifiso. UNkulunkulu ulunge kakhulu—unolwazi olujulile ngokungcola okusenhliziyweni yami. Ngangingasebenzi kanzima ukuze ngime ngasohlangothini lukaNkulunkulu, noma ukuze ngigcine okuthandwa yindlu kaNkulunkulu noma ukuvikela abafowethu nodadewethu, kodwa ngangiceba indlela yokuzakhela udumo. Abaphikukristu babephazamisa futhi bonakalise umsebenzi wendlu kaNkulunkulu, kodwa ngangingakwazi ukuxosha lawa madimoni endlini kaNkulunkulu futhi ngiduduze inhliziyo Yakhe. Empeleni ngangifanelwe ukufa! Ngibhekene nokuhlupheka kanye nokuzisola, ngawela phansi: “O Nkulunkulu! Ukuthi ngingenza lo msebenzi ukuphakanyiswa okukhulu okuvela Kuwe, kodwa ngibe ongabongiyo futhi angizange ngikhathalele intando Yakho. Ngiyenyanyeka ngempela. Namuhla, nginambithe isimo Sakho sokulunga, futhi nakuba ukukhohlakala kwami kuselokhu kukuniningi kakhulu, ngizimisele ukwamukela ukupheleliswa Nguwe. Ngizimisele ukuhlanjululwa kulesi simo, futhi ngizimisele ukwenza konke okusemandleni ami ngenxa Yakho, futhi ngizimisele ngisho nakakhulu ukuma ndawonye nabafowethu nodadewethu ekukhipheni onke amadimoni angabaphikukristu.” Ngemva kokuthandaza, ngabona isiqephu samazwi kaNkulunkulu: “Abantu bakholwa kuNkulunkulu ngenhloso yokufuna ukuthola izibusiso esikhathini esizayo. Bonke abantu banale nhloso nethemba. Nokho, ukukhohlakala okuphakathi kwemvelo yomuntu kufanele kuxazululwe ngezilingo. Kunoma yiziphi izingxenye ongaphumeleli kuzo, kukulezi zingxenye okufanele ucwengwe kuzo—lokhu kuyilungiselelo likaNkulunkulu. UNkulunkulu ukudalela isimo, ekuphoqa ukuba ucwengwe kuso ukuze wazi ukukhohlakala kwakho. Ekugcineni ufinyelela eqophelweni lapho ungamane ufe futhi udele amacebo nezifiso zakho, bese uthobela ubukhosi nelungiselelo likaNkulunkulu.Ngakho uma abantu bengenakho ukucwengwa kweminyaka eminingi, uma bengenakho ukuhlupheka okuthile, ngeke bakwazi ukugwema ukugqilazwa ukukhohlakala kwenyama emcabangweni wabo nasezinhliziyweni zabo. Noma kuziphi izingxenye usengaphansi kokugqilazwa nguSathane, noma kuziphi izingxenye usenezifiso zakho, izimfuneko zakho—yilezi zingxenye okufanele uhlupheke kuzo. Kusekuhluphekeni kuphela lapho kungafundwa khona izifundo, okusho ukwazi ukuzuza iqiniso, nokuqonda inhloso kaNkulunkulu. Empeleni, amaqiniso amaningi aqondwa ngaphakathi kokuzwa izilingo ezibuhlungu. Akekho othi inhloso kaNkulunkulu iyaziwa, ukuthi ukuba namandla onke nokuhlakanipha Kwakhe kuyaqondwa, ukuthi isimo sokulunga sikaNkulunkulu siyaziswa esimweni sokukhululeka noma ezimweni ezivumayo. Lokho ngeke kwenzeke!” (“Indlela Yokwanelisa UNkulunkulu Phakathi Kwezilingo” kwethi Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe)”. Emazwini kaNkulunkulu, ngabona ukuthi ukukhathazeka kwami ngesimiselo sekusasa lami kwakube yinto eyingozi kakhulu emvelweni yami. Ngenxa yokuthi ngangingaphazamisa umsebenzi wendlu kaNkulunkulu ngenxa yayo, futhi ngangingalokhu ngibuswa yiyo, uNkulunkulu waphinde futhi wangenzela isimo sokungicwenga. Kulokhu, ngabona ukuthi uvivinyo nokucwengwa konke kwakungamalungiselelo kaNkulunkulu, futhi ukube akuzange kubhekanwe nami futhi ngicwengwe kule minyaka embalwa, ukube angizange ngihlangabezane nalezi zimo ezimbi, imibono esemphefumulweni wami nasengqondweni ngezinto zenyama ngabe ayiguqukanga. Ngemva kokwelulekwa nokucwengwa ngokuphindaphindiwe, engikufunayo ekuphileni ekugcineni kwaba nokuguquka. Ngangingasazimisele ukukholwa kuNkulunkulu ngenjongo yezibusiso noma ukuba ngenze ukuhwebelana noNkulunkulu, ukuba ngibeke ukubaluleka okukhulu edumeleni nasesikhundleni noma esimiselweni sekusasa lami. Futhi ngaba nokuqonda okucace kangcono ngentando kaNkulunkulu yokusindisa isintu.
Kusukela ngaleso sikhathi, lapho ngenza umsebenzi wami, kungenandaba ukuthi ngiyehliswa esikhundleni noma imisebenzi yami iyaguqulwa, nginokuzotha okukhulu enhliziyweni yami futhi angisakhathazeki njengangaphambili ngokuthi yini engizoyithola noma ezongilahlekela. Ngimane ngizwe ukuthi kungesinye isibopho nomsebenzi owengeziwe. Kungenandaba ukuthi yimuphi umsebenzi engihlelelwe wona, ngizimisele ukumane ngilalele intando kaNkulunkulu bese ngenza noma yini engingakwazi ukuyenza. Imisebenzi engiyenzayo yonke imiswe uNkulunkulu, futhi ngizimisele ukugcina izinyawo zami zigxilile futhi ngifune iqiniso, ngilungise amaphutha namacala ami esikhathi esedlule, ngilandele isibonelo sikaPetru ekuphileni ngokuvumelana nothando olungokoqobo lukaNkulunkulu. Njengamazwi kaNkulunkulu akuleli culo: “O Nkulunkulu! Sichithe isikhathi sehlukene, nesikhathi sindawonye. Angikwenzele lutho, kodwa ungithanda ngaphezu kwakho konke okunye. Ngihlubuke ngokuphindaphindiwe Kuwe futhi ngakuphatha kanzima ngokuphindaphindiwe. Ngingazikhohlwa kanjani izinto ezinje? Umsebenzi owenzile kimi nalokho okubeke kimi ngihlala ngikubeke emqondweni, angikukhohlwa neze. Ngomsebenzi owenze kimi ngizame ngakho konke. Uyakwazi engingakwenza, futhi ngaphezu kwalokho uyalazi iqhaza engingalibamba. Ngizonikela konke enginakho Kuwe. Nakuba uSathane engikhohlise kangaka futhi ngihlubuke ngokuphindiwe Kuwe, ngikholwa ukuthi awungikhumbuli ngalawo macala ami, ukuthi awungiphathi ngokusekelwe kuwo. Ngifisa ukunikela konke ukuphila kwami Kuwe. Angiceli lutho, futhi anginawo amanye amathemba noma izinhlelo; ngifisa kuphela ukwenza ngokwenhloso Yakho nokwenza intando Yakho. Ngizophuza endebeni Yakho ebabayo. Ngizimisele ukunikela inhliziyo nomzimba wami nalo lonke uthando lwami lwangempela Kuwe, ngikubeke phambi Kwakho, futhi ngicabangele intando Yakho ngokungangabazeki. Hhayi ngenxa yenyama, hhayi ngenxa yomndeni, kodwa ngenxa yomsebenzi Wakho” (Imithandazo kaPetru” kwethi Landelani Iwundlu Nihlabelele Izihlabelelo Ezintsha).
Manje, ngikholwe kuNkulunkulu iminyaka engaphezu kweyi-14. Ngenxa yomusa kaNkulunkulu bengifeza njalo umsebenzi wami endlini kaNkulunkulu. Kube nezikhathi ezinhle nezimbi; kube khona uhleko, kwaba khona izinyembezi zosizi, kube khona ukujabula ngokuqonda intando kaNkulunkulu kanye nemizwa yokuba necala ngokukweleta uNkulunkulu. Ngisho nangaphezu kwalokho, kube khona injabulo nokuthula okubangelwa ukwenza iqiniso. Empeleni kuningi kakhulu engikuzuzile. Ngibone ubuhle bokwahlulelwa nokusolwa uNkulunkulu—kungokoqobo ngempela! Ngaphandle kokwahlulela nokusola Kwakhe bengingeke ngibe nokuguquka engibe nakho. Kusukela manje kuya phambili, ngizimisele ukwamukela kakhulu ukwahlulela nokusola kukaNkulunkulu, ukwamukela kakhulu uvivinyo olunzima uNkulunkulu angibekela lona ukuze ngihlanjululwe, ngisindiswe futhi ngenziwe ngipheleliswe uNkulunkulu ngokwahlulela nokusola Kwakhe. Ngalokhu ngingaphila impilo enenjongo ebalulekile!
Okwedlule: Kungani Ngihambe Endleleni YabaFarisi?
Okulandelayo: Ekugcineni Sengithokozela Impilo Kancane Njengomuntu
1. Ukweduka kanye Nokuthola Indlela UXiaobing Wasedolobheni laseXuanzhou, Esifundazweni sase-Anhui “Into oyijabulelalayo namauhla y...
11. Ukuzibuyiselela Kwangempela UZhou Li Edolobheni LaseXintai, Esifundazweni iShandong Kudala, sasidinga ukuhlukanis...
12. Akukho Bantu Abakhethwayo Ebandleni ULiu Xin edolobheni laseLiaocheng, esiFundazweni saseShandong Emva kokulandela uNkulunkulu kule minyaka, ngazizwa s...
13. Ukuqonda intando kaNkulunkulu phakathi kobunzima UXiao Rui wasedolobheni iPanzhihua, isifundazwe saseSichuan Lapho ngishumayela ivangeli ngahlang...
14. Imvelo Yomuntu Ngeze Yahlulelwa Ngokubonwayo uYang Rui wasedolobheni laseYuci esifundazwe sase- Shanxi Ngelinye ilanga, ngabe sengizwa ukuthi ubaba wami wayexos...
Ukweduka kanye Nokuthola Indlela
Ubuhlakani Obukhulu Kunabo Bonke Ukuphakamisa uNkulunkulu Nokubheka Kuyena
Zilungise Wena Ngaphambi Kokulungisa Abanye
Ekugcineni Ngibone Indlela Yokuba Umuntu Wangempela